जब बूढानीलकण्ठ हिँडेका जसपाका नेताहरु बीच बाटोमै बैठक बसे — Imandarmedia.com
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले बोलाएको छलफलमा सहभागी हुन हिँडेका जनता समाजवादी (जसपा) का नेताहरु बाटोमै छलफल गर्न बसेका छन् । बैठकमा एउटै स्वर राख्नका लागि उनीहरु बीच बाटोमै छलफलमा जुटेका हुन् ।
स्रोतका अनुसार जसपाका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई, अर्का अध्यक्षद्वय महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव, बरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो र अर्का नेता अशोक राई बूढानीलकण्ठ छेउछाउमै छलफलमा बसेका हुन् ।
नेताहरु आपसी छलफल सकेर चार बजेसम्म देउवा निवास बूढानीलकण्ठ पुग्ने जसपा स्रोतले जनाएको छ । नयाँ सत्ता समीकरणका लागि काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले माओवादी केन्द्र र जसपासँग छलफल गर्न लागेको हो ।
त्यस्तै सभापति शेरबहादुर देउवाले नेकपा एमालेका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्ता कब्जा गर्न खोजिरहेको आरोप लगाएका छन् । तर ओलीले चाहेको जस्तो नहुने देउवाको भनाइ थियो ।
यस्तै उनले पार्टी वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई वास्तविकताको धरातलमा बसेर कुरा गर्न पनि आग्रह गरे । ‘हामीले वास्तविकता बुझ्नुपर्छ । संसदमा हाम्रो संख्या संसद बेलाउन पनि पुग्दैन । यो वास्तविकता हो । संसद बोलाउन केही संख्या नपुगेर हामीले सहयोग पाएनौं । संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने संख्या हाम्रो पुग्दैन ।
ओलीलाई बोलाएर संसदमा उभ्याउन संख्या पुग्दैन । यो वास्तविक कुरा हो । संविधान अनुसार जानुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘संसदको एक चौथाइ सदस्यले कुनै बेला संसद बाेलाउन सक्छ । हामीसँग एक चौथाइ छैन । यो वास्तविकता हो नि । हामीले के गर्ने त ? सत्य कुरा त्यही हो नि । पहिला यो कुरा बुझ्नुपर्यो नि ।’
चुनावमा कम्युनिस्टको सरकार आए रुन पनि पाउनुहुन्न भनेर आफूले त्यसै नभनेको उनको भनाइ छ । ‘तर जनताले तिनलाई नै भोट हालिदिए के गर्ने ? भोट त हाम्रो हातमा छैन नि ! देशको मालिक जनता हो । जनता हामीलाई हराए के गर्ने ? जनता मालिक हो । जनताको घर दैलोमा जाऔँ । हामी काँग्रेस पार्टी हौं । हामीले धाँधली गर्न जानेको पनि छैन,’ उनले भने । कार्यक्रममा पौडेलले आफूले बोलिसकेर मञ्चमा जाँदा देउवामाथि खनिएका थिए ।